Madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug oo kawada hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug oo kawada hadlay arrimo la xiriira...
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qooqqoor).
Labadan mas’uul ayaa kulanka uga wada hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha la xiriira Doorashooyinka 2020/2021 oo labaduba ay u joogaan Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Sidoo kale, Kulanka ayaa labada madaxweyne waxaa ay uga hadleen sidoo labada dowlad goboleed ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhinac walba ah, si ay u noqdaan laba maamul oo wadashaqeyn rasmi ah dhexmarta.
Waxaa magaalada Muqdisho 24-kii Saac ee la soo dhaafay ka dhacayay kulamo siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashooyinka, kaas oo ay yeelanayeen Madaxda Dowlad goboleedyada iyo Siyaasiyiinta mucaaradka.
arrimo la xiriira doorashooyinka